साइकलयात्राबाट पर्यटकीय क्षेत्र चिनाउने सानो प्रयास| Nepal Pati
- भरत विक्रम शाह
मानिसहरुका आआफ्नै सौख हुन्छन् । हरेक व्यक्तिका सौखहरु राष्ट्रको निम्ती उल्लेखनिय योगदान दिन असमर्थ हुन्छन् । तर केही सौखहरु व्यक्तिगत जस्ता लागे पनि मुलुक निर्माणका लागि महत्वपूर्ण बन्न सक्छन् भन्ने लाग्दैछ ।
कुरा आजभन्दा ३-४ बर्ष पहिलाको हो , मैले ब्यायामको लागि ३५ हजार पर्ने साईकल किने । शारिरीक ब्यायामको लागि बिहानै उठेपछि मेरो गाउँ मजगाउँबाट ९ कि.मि. टाढाको दूरीमा पर्ने अत्तरिया सम्म साईकिलिङ्ग गर्न थाले।
शुरु शुरुमा साइकलको यात्रा गर्दा अलि थकान महशुस हुन्थ्यो । साइकलको यात्रा जारी राख्दै गर्दा विस्तारै मलाई नशा जस्तै लाग्न थाल्यो । म हरेक यात्रा साइकल मार्फत नै गर्थै । साइकलबाट टाढाटाढा नयाँ बस्ती र ठाउँमा पुग्न थाले । मलाइ २०/२५ कि.मि कम हुन थाल्यो र मेरो यात्रा कहिल्यै महेन्द्रनगर कहिल्यै खानीडाँडा कहिले कर्णालीको चिसापानी हुन्थ्याे ।
छुट्टीको दिनमा लामो राइडमा जान्थे बाँकी दिन गुलरिया ,गोदावरी ,धनगढी सम्म जान्थे।लगभग एक बर्ष पछि मलाइ लाग्यो कि मैले अब मेरो साइकल जीवनबाट केहि गर्नुपर्यो । त्यसपछि मैले नयाँ साइकल किने र विभिन्न दुर्गम ठाउँमा पुगेर सुदुरको पर्यटकीय क्षेत्रहरूलाई चिनाउने यात्रामा जाने निधो गरे । अहिलेको बढ्दो सवारी दुर्घटना, पर्यावरणीय दृष्टीकाेण र सडकको अबस्थालाई ध्यान दिदैं मैले शुरु गरेको साइकलयात्रा निरन्तर बढाइ रहे ।
सोही क्रममा आफ्नै पहलमा २०७५ जेठ ५ गते धनगढीबाट सुदूर तथा नेपालकै सुन्दर खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जन सम्मको प्रथम साइकल यात्रा गरे । म सँग धनगढीका मेरा दुई जना छिमेकी भाई बिवेक शर्मा र खगेन्द्र सिंह धामी पनि Tour De Khaptad २०७५ लाई सफल पार्न खप्तड पुगे। धनगढीबाट ४ दिनको निरन्तर साइकलयात्रा पछि हामी खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जमा पुग्न सफल भयौं ।
खप्तड यात्रा सफल भएपछि मलाई अझै सुदूरका अरु ओझेलमा परेका धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा जाने रहर जागेर आएको छ । सुदूर देशको संरचनामा दूर भए पनि यहाँका धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रहरुको अन्य प्रदेशसँग तुलना गर्ने हो भन्ने शव्दमा बयान गर्न सकिदैन । यहाँ प्रचार प्रसारको अभावमा थुप्रै पर्यटकीय क्षेत्र ओझेलमा परेका छन् । मेरो दोस्रो पहाडी साईकलयात्रा कञ्चनपुरको पुनर्बासबाट डडेलधुरा, घटाल थान,रावलतोलिगुफा,अमरगढि किल्ला र आलिताल सम्मको थियो । जुन यात्रा मैले मेरा गुरु तिर्थराज अवस्थी र पोखराका मित्र युधिर गुरुङसँग पुरा गर्ने अबसर प्राप्त गरे । मेरो साइकल यात्राको लागि डडेलधुरा निवासी दाजु गणेश थापा मगरले ठुलो भुमिका खेल्नु भएको थियो। आलिताल पुग्ने पहिलो साइकल समूह बन्न पाएकोमा थप खुसी र हौसला मिलेको थियो ।
मलाइ सुदूरपश्चिम चिनाउने नशाले सताउन थाल्यो र २०७५ मङसिर १ गते मैले डोटी जिल्लामा पर्ने बडिकेदारको पहिलो एकल साइकल यात्रा शुरु गरे। पहिलो दिन गत मंसिर १ गते बिहानै ५ बजे मेरो घर गोदावरी न.पा. ८ मजगाउबाट शुरु गरेको यात्रा डोटीको बि.पि.नगर सम्म भयो । दोस्रो दिन बि.पि. नगरबाट खड्उली भन्ने ठाउ सम्म भयो। तेस्रो दिनको यात्रा अत्तरकांडासम्म र चौथो दिनको यात्रा अत्तरकांडा बाट ४ घन्टा ठाडो उकालो साइकल काधमा बोकेर बडिकेदार गाथ सम्म भयो। बडिकेदार धाम सारै सुन्दर तथा धार्मिक हिसाबले शक्तिशाली धाम मानिन्छ । यहाँ जे माग्यो त्यो बर मिल्ने जनविश्वास रहँदै आएको छ ।
मैले पनि केही मागेको थिए त्यो बिस्तारै पुग्दै छ। बडिकेदारको सफल मेरो एकल साईकल यात्रा पछि मैले बि.पि. नगर डोटीबाट पहाड जोरायल ५ मा पर्ने चौकी गाउँ हुँदै सारै विकट बाटो नपुगेको ठाँउ दिनभर साईकल बोक्दै जोरायल डोटी र बुडर सम्म पुगे ।
घर पुग्दा पुरै ११ दिनको यात्रा भयो। यो यात्राको क्रममा बडिकेदार गाउँपालिका र जोरायल गाउँपालिका परिवारले मलाइ आर्थिक सहयोग र पुरै बस्न खान सहयोग गर्नु भएको थियो । जुन सहयोग मेरा लागि अबिस्मरिय नै रहेको छ ।
मेरो आगामि गन्तव्य बाजुरा जिल्लामा पर्ने प्रमुख धार्मिक र स्वर्ग जस्तो सुन्दर ठाँउ बडिमालिकाको रहेको छ। यसका लागि मैले योजनाका साथ सुदूरपश्चिममा सहयोगी हातहरुको खाँचो रहेको छ ।
साहेद सुदूरपश्चिमका पत्रकार ,पर्यटन सँग सम्बधित महानुभावले साथ दिएमा र मलाइ हौसला दिनुभयो भने अछाम जिल्लाको रामारोशन, बैतडी को विभिन्न ठाँउ दार्चुला, बझाङका विभिन्न ठाउँलाई साईकल पर्यटनको प्रमुख गन्तब्य बनाउने मेरो सपना रहेको छ।
नेपालका पूर्वी जिल्लाहरुमा साईकल को लागि खेलकुद हुन्छ । तर सुदुर अझै पछाडी छ मेरो चाहना पश्चिमका साईकिलिङ्ग संघ तथा साईकल क्लब खोल्नु र देश बिदेसका साईकल प्रेमीलार्इ सुदूरपश्चिम भित्र्याउन रहेको छ । मेरो सानाे प्रयास भए पनि साइकलयात्रको पहल शुरु गरिसकेको छु । तर राज्यको तर्फबाट सहयोग दुरदराजको पर्यटकीय क्षेत्र चिनाउने लक्ष पुरा हुनेमा म ढुक्क रहेको छु ।
मेरो अबको उद्धेश्य भनेको ओझेलमा परेका तमाम पर्यटकीय स्थलहरुको अध्ययन, अनुसन्धान गर्दै साईकलको सम्भाव्यताका बारेमा समेत अध्यन गरि उजागर गर्नु रहेको छ ।
यसरी शारिरीक ब्यायामको लागि शुरु गरेको मेरो साईकल जीवन देश र सुदुर चिनाउने सपना बुन्ने सम्म पुग्ने छ ।, म सम्पुर्ण पत्रकारहरुलाई बिन्तिपत्र चढाउन चाहन्छु। साथ दिनुहोस मेरो सपना पूरा गर्न सहयात्री बनिदिनुस।मैले केही दिन सक्दिन तर तपाइहरुले धेरै कुरादिन सक्नुहुन्छ।